Inkundla yeFISA - iNkundla yoPhengululo lweeNkcukacha zangaphandle
Yiyiphi iNkundla yeNgcaciso kunye naBagwebi
Inkundla ye-FISA yiphaneli ekhuselekileyo yegqeba elinesigqeba esi-11 esinegunya eliphambili lokuthatha isigqibo sokuba urhulumente wase-United States unobungqina obaneleyo kumagunya angaphandle okanye abantu abakholelwa ukuba bangamazwe angaphandle ukuba bavumele ukuhlolisiswa kwabo luluntu. I-FISA isichazizwi soMthetho woPhengululo lweeNkcukacha zangaphandle. Inkundla iphinda ibhekiswe njengeNkundla yoPhengululo lweeNkcukacha zangaphandle, okanye i-FISC.
Urhulumente wephondo awukwazi ukusebenzisa inkundla ye-FISA ukuba "ujolise ngenjongo nayiphi na ummi wase-US, okanye nawuphi na umntu wase-US, okanye ukujolisa ngenjongo nayiphi na umntu owaziwayo ukuba e-United States," nangona i-Arhente yeSizwe yoKhuseleko iye yavuma ukuba iqokelela ulwazi ngokungabonakaliyo kwezinye AmaMelika ngaphandle kwesiqinisekiso egameni lokhuseleko lwesizwe. I-FISA, ngamanye amazwi, ayikho isixhobo sokulwa nokukhuseleka kobukhohlakele basekhaya kodwa sele isetyenziswe kwithuba le-Septemba 11 emva kokuqokelela idatha kumaMelika.
Inkundla ye-FISA idibanisa kwi-"bunker-like" yinkqubo eyenziwa yiNkundla yesithili sase-US kuMgaqo-siseko weAvenue, kufuphi neNdlu ye-White House neCapitol. Inkundla kuthiwa yinto engathintekiyo ukukhusela i-opsdropping kwaye abagwebi abazithethi esidlangalaleni malunga namatyala ngenxa yobume bokhuseleko lwesizwe.
Ukongeza kwintendelezo ye-FISA, kukho igumbi lesibini eliyimfihlo lekhotho elibizwa ngokuba yiNkundla yoPhengululo lweeNkcazo zeZizwe eziManyeneyo. Ubani umthwalo wokunyamekela nokuphonononga izigqibo ezenziwe yiNkundla ye-FISA.
Inkundla yokuHlola, njengenkundla ye-FISA, ihleli eWashington, DC Kodwa yenziwe ngabagwebi abathathu kuphela enkundleni yesithili okanye enkundleni.
Imisebenzi yeNkundla yeFISA
Indima yenkundla ye-FISA indima ekulawuleni izicelo kunye nobungqina obungeniswe nguRhulumente waseburhulumenteni kunye nokunikezela okanye ukukhanyela iimvume zokubakhokhelwa kwikhompyutha, ukukhangela ngokwenyama, kunye nezinye izenzo zokuphenya ngeenjongo zengqondo. "Inkundla yodwa ehlabathini Unamagunya okuvumela ama-agent aseburhulumenteni ukuba aqhube "ukugadwa kwe-elektroniki kwamanye amazwe okanye i-arhente yamanye amazwe ngenjongo yokufumana ulwazi lwengqondo lwangaphandle," ngokubhekiselele kwi-Federal Judicial Centre.
Inkundla ye-FISA idinga ukuba urhulumente wesigqeba anike ubungqina obuninzi ngaphambi kokuba unike inkxaso-mboleko, kodwa abagwebi abasoloko bevalela izicelo. Ukuba inkundla ye-FISA inikeza isicelo sokongamela urhulumente, iyanciphisa ububanzi beqoqo lobunkokheli kwindawo ethile, umnxeba okanye i-akhawunti ye-imeyili, ngokwemibiko epapashwe.
"I-FISA isusela ekumiselweni kwayo ibe yinto enesibindi nangenzuzo kweli lizwe lokulwa nemizamo yoorhulumente bamazwe kunye namajelo abo ukuba bahlanganyele kwingqungquthela yeengcinga ezijoliswe kuburhulumente base-US, nokuba baqinisekise umgaqo-nkqubo wabo wexesha elizayo okanye ukuphumeza umgaqo-nkqubo okhoyo, ukufumana ulwazi olungenalo noluntu olufumanekayo, okanye ukubandakanya imizamo yokungaxeli, "kubhala uJames G. McAdams III, owayeseseburhulumenteni beSebe lezobuLungisa kunye nomlawuli wezomthetho ophezulu kunye neSebe leZiko loQeqesho loLawulo lokuQinisekisa uMthetho.
Imvelaphi yeNkundla yeFISA
Inkundla ye-FISA yasungulwa ngowe-1978 xa iCongress yamisela uMthetho woLwaphulo-mthetho oluPhandle. UMongameli uJimmy Carter wasayina lo msebenzi ngomhla ka-Oktobha 25, 1978. Ekuqaleni kwakujoliswe ukuba kuvumele ukuhlolisiswa kwe-elektroniki kodwa kuye kwandiswa ukuba kufakwe ukukhangela okwenziwe kunye nezinye iindlela zokuqokelela idatha.
I-FISA isayinwe kumthetho phakathi kweMfazwe yeCold kunye nexesha lokungathembeki ngokujulileyo kumongameli emva kokuhlaselwa kwe- Watergate kwaye ichaza ukuba urhulumente wephondo usetyenzise ukuhlola nokucwaninga kwabemi, ilungu leNgqungquthela, abasebenzi bebandla, abaqhankqalazi bemfazwe kunye Inkokeli yamalungelo oluntu kuMartin Luther King Jr. ngaphandle kwemvume.
"Isenzo sinceda ekuqiniseni ubudlelwane phakathi kwabantu baseMerika kunye noorhulumente wabo," uCarter uthe ngokusayinela umthetho-mthetho. "Inika isiseko sokuthembela kwabantu baseMelika ekubeni imisebenzi yee-arhente zazo zisebenza ngokusemthethweni kwaye zivumelekile. Inika isisithelo esaneleyo ukuqinisekisa ukuba iinkcukacha eziphathelele ukhuseleko lwesizwe ziyafumaneka ngokukhuselekileyo, ngelixa kuvumela ukuhlaziywa iinkundla kunye neCongress ukukhusela amalungelo aseMerika nabanye. "
Ukwandiswa kwamandla eFISA
UMthetho woPhengululo lweeNkcukacha zangaphandle uwandiswe ngaphaya kwexesha laso lokuqala kwangoko uCarter wabeka uphawu lwakhe kumthetho ngo-1978. Ngo-1994, umzekelo, isenzo satshintshelwe ukuba inkundla inike imvume yokusebenzisa iirejistra zokubhala, umgibe kwaye zilandele iifowuni kunye neirekhodi zoshishino. Uninzi lwezinto ezihamba phambili zenzeke emva kokuhlaselwa kwamagorha ka Septemba 11, 2001. Ngelo xesha, abantu baseMelika babonisa ukuzimisela ukuthengisa ezinye iinkolelo zenkululeko egameni lokhuseleko lwesizwe.
Ezi ziphumo ziquka:
Umhlathi we- USA Patriot Act ngo-Oktobha 2001 . Isichazamazwi simele sidibanise kunye nokuqinisa iMelika ngokunikezela ngeethuluzi ezifanelekileyo ezifunekayo ukuze zithintele kwaye zivimbele ubuphekula. UMthetho we-Patriot wandisa ububanzi bokusetyenziswa koburhulumente kunye nokuvumela uluntu ukuba lusebenze ngokukhawuleza kwi-wiretapping. Abachasayo kuquka i-American Civil Liberties Union, nangona kunjalo, babonisa ukuba urhulumente wafumana iirekhodi zabasebenzi baseMelika abaqhelekileyo kwiilayibrari nakwiiNkonzo ze-intanethi ngaphandle kweso sizathu.
Umhlathi we-Protect America Act ngo-Agasti 5, 2007. Umthetho wavumela i-Arhente kaZwelonke yoKhuseleko ukuba iqhube ingqwalaselo ngaphandle kwesiqinisekiso okanye imvume evela enkundleni ye-FISA kumhlaba wase-America ukuba bekujoliswe ukuba igosa langaphandle. "Enyanisweni," kubhala i-ACLU, "urhulumente ngoku unokwenza zonke iinkcukacha zonxibelelwano eziza okanye eziphuma eUnited States, ngokude nje zijolise kumntu othile waseMerika ngokukodwa kwaye inkqubo" ilawulwa "ekupheleni kwamanye amazwe unxibelelwano. Kungakhathaliseki ukuba kujoliswe okanye kungenjalo, iifowuni zaseMerika, ii-imeyile kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi ziya kubhalwa nguRhulumente wethu, kwaye kungabikho ukusola malunga nokungahambi.
Umhlathi we-FISA Amendments Act ngo-2008, owunika urhulumente igunya lokufikelela kwiinkcukacha zonxibelelwano kwi-Facebook, Google, iMicrosoft kunye ne-Yahoo. Njengokukhusela uMthetho wama-Amerika ka-2007, uMthetho we-FISA Amendments Act ojoliswe ngabangewona abemi ngaphandle kwe-United States kodwa abachaphazelekayo ngabammeli ngenxa yokuba abantu abanomdla wokulinganisa babelungele ngaphandle kolwazi lwabo okanye i-warrant evela enkundleni ye-FISA.
Amalungu eNkundla yeFISA
Abagwebi abashumi elinanye abasemagunyeni banikezelwa inkundla yeFISA. Baqeshwe ngumthetho ophezulu weNkundla ePhakamileyo yase - US kwaye bakhonza imiqathango eminyaka emithathu, engenakuhlaziywa kunye nokugqithiselwa ukuqinisekisa ukuqhubeka. Abagwebi beeNkundla zeNkundla zeFISA abaxhomekeke kwiziqinisekiso zokuvalelwa njengalezo zifunwa kwiNkundla ePhakamileyo yeeNkundla.
Ummiselo ogunyazisiweyo wokudalwa kwetyala le-FISA uyalela ukuba abagwebi bamele ubuncinane bee-7 zezigwegwe ze-US kwaye aba bathathu abagwebi bahlala ngaphakathi kweekhilomitha ezili-20 zaseWashington, DC, apho inkundla ihlala khona. Abagwebi baphambukela ngeveki enye ngexesha elijikelezayo
Iigqwetha zeNkundla zeNkundla zeFISA zikhoyo:
I-Rosemary M. Collyer: Ungumgwebi olawulayo kwinkundla ye-FISA kwaye ube ngumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseColumbia ukususela ekutyunjweni kwibhenki likaMongameli uGeorge W. Bush ngo-2002. Ixesha lakhe kwiNkundla yeFISA yaqala NgoMeyi 19, 2009, kwaye iphelelwa nguMatshi 7, 2020.
UJames E. Boasberg: Ube ngumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwiSithili sase-Columbia ukususela ekutyunjweni kwibhenki likazwelonke nguMongameli uBarack Obama ngo-2011. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoMeyi 19, 2014, kwaye iphelelwa nguMatshi 18, 2021. .
URudolph Contreras: Ube ngumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseColumbia ukususela ekutyunjelwe kwibhenki ka-Obama ngo-2011. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoMeyi 19, 2016, kwaye iphelelwa nguMeyi 18, 2023.
U-Anne C. Conway: Ungumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwi-Middle District yaseFlorida ukususela ekutyunjweni kwi-bench federal nguMongameli George HW Bush ngo-1991. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoMeyi 19, 2016, kwaye iphelelwa nguMeyi 18 , 2023.
URaymond J. Dearie: Ube ngumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMpuma saseNew York ukususela ekutyunjweni kwibhenki likaFrederal nguMongameli uRonald Reagan ngo-1986. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoJulayi 2, 2012, kwaye iphelile ngoJulayi 1 , 2019.
UClaire V. U-Eagan: Ube ngumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwisiThili saseMntla sase-Oklahoma ukususela ekutyunjweni kwi-bench federal nguMongameli uGeorge W. Bush ngo-2001. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoFebruwari 13, 2013, kwaye iphelile Meyi 18, 2019.
UMartin LC Feldman: Ubengumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwi-Eastern District yaseLouanda kusukela ekutyunjelwe kwibhenki likaMongameli uRonald Reagan ngowe-1983. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoMeyi 19, 2010, kwaye iphelile ngoMeyi 18, 2017 .
UJames P. Jones: Usebenze njengomgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwi-Western District yaseVirginia ukususela ngokutyunjelwa kwibhenki likaMongameli uWilliam J. Clinton ngo-1995. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA laqala ngoMeyi 19, 2015, kwaye iphelile ngoMeyi 18, 2022.
UMichael W. Mosman: Usebenze njengomgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseOregon ukususela ekutyunjelwe kwi-bench federal nguMongameli uGeorge W. Bush ngo-2003. Ixesha lakhe kwiNkundla yeFISA yaqala ngoMeyi 04, 2013, kwaye iphelile ngoMeyi 03, 2020.
UThomas B. Russell: Usebenze njengejaji leNkundla yeSithili sase-US kwiWestern District yaseKentucky ukususela ekutyunjelwe kwi-bench federal nguClinton ngo-1994. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoMeyi 19, 2015, kwaye iphelile ngoMeyi 18, 2022 .
F. UDennis Saylor IV: Ungumgwebi weNkundla yeSithili sase-US kwiSithili saseMassachusetts ukususela ngokutyunjelwa kwibhenki likaMongameli uGeorge W. Bush ngo-2003. Ixesha lakhe kwiNkundla ye-FISA yaqala ngoMeyi 19, 2011, kwaye iphelile ngoMeyi 18, 2018.
IBhunga leSizwe laBafazi beNigro: UkuFakela iNguqulelo
I-Princess Princess, Princess Princess kunye neDuchess yeFife
Onam: iKarnival yaseKerala
Indlela yokugcina izigulane kwiPilwood yakho